कोरोना कहरमा किसानको सपना
नवीन गड्तौला बुधबार, असार १७, २०७७, १३:०१:००
इनरुवा नगरपालिका कार्यालयमा आधुनिक कृषि सहरको नारा ।
निरन्तर जारी लकडाउनका कारण कृषि उत्पादन बिक्री गर्न नसक्दा इनरुवा–२ मेहता टोलका कृषक रामचन्द्र मेहताले १५ धुर जग्गा गुमाउनुपर्‍यो । वर्षौंदेखि तरकारी खेतीसँगै परम्परागत कृषि कर्म गर्दै आएका मेहताले कृषिलाई व्यावसायिक गर्ने उद्देश्यसहित कृषि विकास बैंकबाट दुई लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । समयमा साँवा र ब्याज तिर्न नसक्दा उनले छ लाख रुपैयाँमा जग्गा बेचे र त्यही पैसाले बैंकको तिरो तिरे । साँवा–ब्याज गरेर उनले बैंकलाई अढाई लाख रुपैयाँ बुझाए । खेतीकै लागि छिमेकीसँग लिएको सरसापट पनि चुक्ता गरे ।
कोरोना त्रासले बजार खजबजिएपछि उनले लगाएको तरकारी बाली पूरै प्रभावित भयो । बजार अभावमा लौका, बन्दा, खोर्सानी, बैगुन, टमाटर र पटुवा साग केही खेतमै कुहिए, केही छिप्पिएर काम नलाग्ने भए । १२ कठ्ठा जग्गामा उनले व्यावसायिक तरकारी उत्पादन गर्दै आएका थिए । यो सिजनमा उनले तीन कठ्ठामा लौका, तीन कठ्ठामा बन्दा, दुई कठ्ठामा टमाटर तथा एक–एक कठ्ठामा खोर्सानी, बैगुन र पटुवा साग लगाएका थिए ।
बजार लान नपाएको च्याउसँग इनरुवा–८ डुम्राहाका कृषक सुधिर मेहता ।
बैंकबाट ल्याएको एक लाख रुपैयाँ लगानी गरेर राम्रो प्रतिफल पाइने आशामा थिए रामचन्द्र । लगानीअनुसार उत्पादन पनि राम्रै भएकाले उनी उत्साहित थिए । तर जब तरकारी बजारमा जाने बेला भयो, लकडाउन सुरु भयो, भनौं दशा सुरु भयो । बजारमा तरकारी बेचेर पैसा बटुल्ने बेलामा लौका, बन्दालगायत तरकारी कुहिएर फाल्नुपर्‍यो ।
सोही टोलका लखन मेहताले १० कठ्ठा क्षेत्रफलमा लगाएको तरकारी पनि बजार अभावमा खेतमै कुहियो । नियमित व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका मेहताले लगाएको टमाटर, लौका, बैगुन र बन्दाकोबी खेतमै सडे । तीन लाख रुपैयाँ लगानी गरेको तरकारीबाट सात लाख कमाउने उनको सपना पनि कुहिएर गयो ।
इनरुवा–८ डुम्राहाका कृषक सुधिर मेहतालाई यतिबेला बैंकको साँवा–ब्याज तिर्ने चिन्ताले सताएको छ । व्यावसायिक रूपमा च्याउ खेती गर्दै आएका मेहता उत्पादनले बजार नपाएर निराश छन् । विभिन्न बैंकबाट पटक–पटक गरी उनले ३२ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर सुमन कृषि फार्ममा लगानी गरेका छन् । २०६७ सालमा ५० हजार रुपैयाँ लगानीमा सुरु गरेको फर्मबाट उनले च्याउ उत्पादन गर्दै आएका छन् । क्षेत्रीय कृषि तालिम केन्द्र झुम्कामा तालिम लिएपश्चात उनले च्याउ उत्पादनमा वृद्धि गर्दै लगे । उनले १५ कठ्ठा जग्गा लिजमा र आफ्नो पाँच कठ्ठा गरी एक बिघामा १५ वटा टहरा निर्माण गरेर २५ हजार सिलिन्डर च्याउ उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको च्याउ पकेट कार्यक्रमअन्र्तगत रहेर दैनिक च्याउ उत्पादन गर्दै आएका हुन् ।
मेहताका अनुसार लकडाउनअघिसम्म दैनिक दुईदेखि तीन क्विन्टलसम्म च्याउ उत्पादन हुन्थ्यो । सुमन कृषि फार्मको उत्पादन इनरुवा, झुम्का, दुहवी, इटहरी, धरान, विराटनगर, गाईघाटलगायत प्रमुख बजारहरूमा पुग्थ्यो । एकपटक लगाएको सिलिन्डरबाट तीन लटसम्म च्याउ उत्पादन हुन्छ । यसपालि च्याउ लगाएको पहिलो लटमै लकडाउन सुरु भयो र बजारसम्म पुर्‍याउन नसकिँदा लगानी उठाउन नसकिएको उनले बताए । उनको फर्ममा आठ जनाले रोजगारी पाएका थिए ।
लकडाउनको मारमा परेको लौका देखाउँदै इनरुवा–२ का कृषक रामचन्द्र मेहता ।
लकडाउनको समयमा उत्पादन भएको च्याउ बजारसम्म पुर्‍याउन नसक्दा गाउँघरमै बाँडेको र बाँकी नष्ट भएको उनले बताए । ‘उत्पादन ठिक्क बेच्ने बेलामा गाडी चलेन मात्र होइन, कृषि–बजार पनि ठप्प भयो । केही सानातिना टुक्रे व्यापारी सिटी सफारीमा गाउँघरतिर घुमाए पनि मान्छेले कोरोना सर्छ झैं गरे । किन्न मानेनन्,’ मेहताले भने, ‘नबिकेपछि केही छिमेकी र आफन्तलाई त्यसै बाँड्यौं, दुई–तिहाइ चाहिँ कुहिएरै गयो ।’
कोसँग गुहार माग्नु
तरकारीको पकेट क्षेत्र इनरुवा–९ बबियाका कृषक मोहन खत्बे शर्माले पाँच कठ्ठा क्षेत्रफलमा लगाएको करेला हेर्दाहेर्दै बारीमै झरेर सकिए । लकडाउन सुरुको भएको हप्ता २०÷२५ किलो बिक्री भए पनि त्यसपछि थपिएको त्रास र अन्योलका कारण लगभग पाँच क्विन्टल करेला कुहिएर झरे ।
लकडाउनले एग्रोभेट पसलसमेत बन्द हुँदा हप्ता–हप्तामा छर्कनुपर्ने औषधि नपाएर धेरै करेला कुहिएका हुन् । झरेर कुहिएको करेला गन्हाएर बारीमा जानै नसकिने अवस्था पनि उनले जीवनमा पहिलोपल्ट भोग्नुपर्‍यो । सप्रेर फलेका करेलाले बजार नपाउँदा लगानी डुबेको खत्बे बताउँछन् ।
कुहिएको करेला देखाउँदै इनरुवा–९ बबियाका कृषक मोहन खत्बे शर्मा ।
‘२५ हजार रुपैयाँ लगानी लगाएको करेला खेतीबाट एक लाख रुपैयाँ जति कमाउने योजना थियो,’ शर्माले भने, ‘कोरोनाले गर्नुगर्‍यो । करेला कुहिँदा कस्तो गन्हाउँदो रहेछ भन्ने कुरा पहिलोपल्ट थाहा भयो ।’
पहिले एक सय ५० रुपैयाँ किलोसम्म बिक्री गरेको करेला यतिबेला चार रुपैयाँ किलो लैजाओ भन्दा पनि कसैले नलगेको खत्बेले बताए । ‘कोरोनाले सबै क्षेत्रमा क्षति गरेकाले कसलाई भन्नु, कोसँग गुहार माग्नु,’ उनले भने, ‘संसारै समस्यामा छ भनी चित्त बुझाएको त छु तर अब घर–व्यवहार कसरी धान्ने भन्ने चिन्तामा छु ।
थप तनाव र अपेक्षा
व्यावसायिक केरा खेती गर्दै आएका इनरुवा–४, गणेशपुरका कृषक सत्यनारायण चौधरीलाई पनि यतिबेला बैंकको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने समस्या थपिएको छ । आफ्नो उत्पादनले बजार नपाएपछि उनमा तनाव थपिएको हो । केरा तथा अन्य खेतीका लागि भनेर उनले स्थानीय सहकारी र बैंकबाट तीन लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए ।
डेढ बिगाहा क्षेत्रफलमा केरा खेती लगाउँदा उनको एक लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । दुईचोटि मल, मजदुर ज्याला, ढुवानीलगायतमा एक लाख खर्च भएको चौधरी बताउँछन् । किराले संक्रमण गरेर केराको बोट नै खाइदिएपछि उत्पादन सप्रिन पाएन । लकडाउनका कारण हप्तैपिच्छे छर्कनुपर्ने औषधि नपाएपछि केरामा संक्रमण झन् बढ्यो । दाम्चा तथा गुवामा किरा लागेर केराको बोट नै लड्यो । नलडेका बोटमा लागेका कोसा पनि छिर्कामिर्का देखिएर सप्रिएन ।
किराले ढालेको केराको बोट देखाउँदै इनरुवा–४, गणेशपुरका कृषक सत्यनारायण चौधरीकी पत्नी इनरदेवी ।
किरा नलागी केरा फल्दा ७० प्रतिशत उत्पादन राम्रो हुने उनको अनुभव छ । उत्पादन सप्रिएर केराले बजार पाउँदा चार लाख रुपैयाँसम्मको बिक्री हुन्थ्यो । त्यसमा खर्च कटाउँदा पनि दुई–तीन लाख रुपैयाँ कहीं जाँदैनथ्यो ।
कृषक चौधरी कहिलेकाहीं खुद्रा बेच्न आफैंले हटिया लाने गरे पनि ठूलो परिमाणमा केरा उठाउन व्यापारीहरू बारीसम्मै आउँथे । बारीमै आएका व्यापारीले पनि सयकडा एक सय ५० का दरले किन्थे । व्यावसायिक हुन खोज्दाखोज्दै पनि लकडाउनका कारणले लगानी डुबेपछि बैंकलाई कसरी फर्साउने होला भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् उनी । यस्तो अवस्थामा बैंकले पनि ब्याज छुटको सुविधा दिए केही राहत हुने उनको अपेक्षा छ ।
७५ प्रतिशत खत्तम
इनरुवा–४ बसचोकनजिकै रहेको तरकारी हाट, रामजानकी कृषि थोक बजार पूर्वमा सबैभन्दा सस्तो तरकारी किन्न पाइने स्थलका रूपमा परिचित छ । सेरोफेरोका किसानले बारीको उत्पादन यहाँ ल्याउने र यहाँबाट थोक व्यापारीले तरकारी किनेर भद्रपुर, दमक, उर्लाबारी, विराटनगर, धरान, इटहरी, उदयपुर, राजविराज, जनकपुर, हरिवन, काठमाडौंसम्म लाने सञ्जाल बनेको छ । सामान्य दिन हुँदा सो थोक बजारबाट वार्षिक डेढ अर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने गर्छ ।
‘लकडाउनका कारण यहाँको कारोबार ७५ प्रतिशत खस्कियो,’ रामजानकी कृषि थोक बजार व्यवस्थापन समितिका प्रमुख संरक्षक हरिलाल मेहता भन्छन्, ‘बजार लाग्न पाएन । लकडाउन सुरु भएको पहिलो हप्ता सुरक्षित तरिकाले बजार लगाउने भन्दा व्यापक विरोध भयो । मान्छेहरूले भिडियो खिचेर फेसबुकमा, युटुबमा हाले । कोरोनाको डर देखाएर दबाब दिए । दबाब थेग्न नसकेर हामीले दुवै गेटमा ताला लगाउनुपर्‍यो ।’
लकडाउनको मारमा परेको टमाटर खेती ।
संरक्षक मेहताका अनुसार गाडी नचल्दा किसानको उत्पादन बजारमा जान नपाएर बारीमै कुहिए । लकडाउनका कारण किसान त मरे–मरे, व्यापारीहरू पनि ऋणमा डुबे । कृषि बजारको धुकधुकी भने जसोतसो चल्दै छ । सीमित गाडीले तरकारी ढुवानी पास पाएका हुन्छन् । सीमित मात्रामा सीमित बजारमा चाँडै नकुहिने तरकारी जान्छन् । चाँडो कुहिने तरकारी उत्पादन गर्ने किसानको अवस्था बर्बाद छ ।
‘लकडाउनका कारण कृषकहरूमध्ये पनि सबैभन्दा बढी तरकारी उत्पादकहरू मारमा परे,’ मेहताले भने, ‘भारतमा सामान्य अवस्था हुँदासमेत सरकारले किसानलाई मल, बिउ, विषादीमा राहत दिन्छ । अहिले लकडाउनको मारमा परेका किसानलाई भारतमा सरकारले विशेष प्याकेज घोषणा गरेको समाचार पढ्न पाइयो । तर नेपालका किसानको माइबाप को छ ? सबै किसानको नाममा फोकटिया राजनीति गर्ने छन् ।’
कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीका प्रमुख नुनुलाल उरावँको टेबुलमा यतिबेला क्षतिपूर्ति माग गरिएका फाइलको चाङ छ । लकडाउनका बेला उत्पादन भएको तरकारी बजारमा बेच्न नपाएपछि क्षतिपूर्ति माग गरिएका निवेदनको फाइल हेर्दै, मिलाउँदै उनको दिन बित्ने गरेको छ । दिनमै आठ–दश जना किसान बिलौना गर्दै आउने गरेको उरावँ बताउँछन् ।
लकडाउनका कारण नोक्सानी भोगेका कृषकको अवस्था दयनीय भएको उनको अनुभव छ । पीडित कृषकहरू वडा तथा नगरपालिकाको सिफारिससहित क्षतिपूर्ति माग गर्दै आउने गरेको उरावँ बताउँछन् । उरावँका अनुसार लकडाउनले टमाटर खेतीमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ । त्यसपछि काँक्रा, लौका, भिन्डी, खोर्सानी, फर्सी, बोडी, बैगुन, करेला, परवललगायत तरकारीमा लकडाउन तथा कोरोनाको गम्भीर असर परेको छ । ‘भण्डारण गरेर राख्न नसकिने तरकारीहरूमा बढी क्षति र भण्डारण गर्न मिल्ने तरकारीमा कम क्षति भएको छ,’ उरावँ भन्छन्, ‘हामी कुन–कुन बालीमा के–कस्तो क्षति भएको छ, त्यसको तथ्यांक संकलन गर्दैछौं ।’
लकडाउनको मारमा परेको करेला खेती ।
कोल्ड–स्टोर दाबी तथा क्षतिको विवरणसहित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै कृषि ज्ञान केन्द्रमा किसानको निवेदन आउने गरेको र त्यस्तो निवेदन सीधै प्रदेश मन्त्रालयमा पठाइने उरावँ बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारमा फाइल पुगेपछि मन्त्रालयले नै क्षतिको विवरणअनुसार क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउने हो,’ उनले भने ।
सुनसरीमा तरकारी जोन, पकेट, ब्लक गरी एक हजार तीन सय हेक्टरमा तरकारी खेती हुँदै आएको छ । इनरुवा नगरपालिकामै पाँच सय हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा तरकारी उत्पादन हुन्छ । लकडाउनको तीन महिने अवधिमा दुई हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी तरकारी नष्ट भएको उरावँले जानकारी दिए ।
नगरमा छैन तथ्यांक
इनरुवा नगरपालिकाको नवनिर्मित भवनअगाडि ‘समृद्ध इनरुवा बसोबासयोग्य हाम्रो नगर, सामाजिक सद्भावयुक्त आधुनिक कृषि सहर’ नारा लेखिएको छ । यसरी नारामा इनरुवालाई ‘आधुनिक कृषि सहर’ उपमा दिइए पनि इनरुवा नगरपालिकासँग आधुनिक कृषि सहर अवधारणाका लागि समयको मागअनुसार काम गर्ने दक्ष जनशक्ति छैन । नगरपालिकाको कृषि शाखा, कृषिबारे सामान्य अध्ययन गरेका खरिदारस्तरका दुई जना महिला कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ ।
लकडाउनको मारमा परेको खोर्सानी खेती ।
त्यसो त निर्वाचित नगरप्रमुख राजन मेहताको कार्यकक्षमा उनको चुनावी घोषणापत्र हरहमेसा राखिएको हुन्छ । त्यसमा कृषिसम्बन्धी ‘सबै वडामा कृषि सूचना तथा स्रोतकेन्द्र स्थापना गर्ने, हरेक वर्ष कृषक अनुभव आदान–प्रदान भ्रमण व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक वर्ष कृषि तथा औद्योगिक प्रदर्शनी गर्ने’लगायत सन्दर्भ उल्लेख छ । तर नगरको कृषि शाखाका कर्मचारीलाई यसबारे थाहा÷चासो छैन ।
‘यो लकडाउनको अवधिमा इनरुवा नगरपालिकाका किसानले कुन प्रजातिका तरकारी कति परिमाणमा लगाएका थिए र तिनमा कति क्षति भएको अनुमान छ ?’ लकडाउनका कारण इनरुवाको कृषिमा परेको असरबारे समाचार तयार पार्न जिज्ञासा राख्दा दुवै कर्मचारीले मुखामुख गरे । कृषि शाखा हेर्ने जिम्मेबारी पाएकी समुना कोइरालाले एकछिन पछि भनिन्, ‘त्यस्तो तथ्यांक हामीसँग छैन । हामीले चाहिएको बेला जिल्ला तथ्यांक कार्यालयबाट लिएर प्रयोग गर्ने हो । यहाँ हाम्रो काम भनेको किसानलाई पर्ने समस्या र दिने भनिएको राहतका लागि सिफारिस गर्नेमै सीमित छ ।’
यस विषयमा नगरप्रमुख राजन मेहता स्वयम् क्षुब्ध छन् । ‘जनताको अपेक्षा छ नगरपालिकाले अद्यावधिक हुँदै काम गरोस् तर कोही विज्ञ कर्मचारी नै इनरुवा नगरपालिका मातहतमा बसेर काम गर्न चाहँदैनन्,’ नगरप्रमुख मेहताले भने, ‘दैनिक समस्या समाधानमा जुध्दै हाम्रो समय जान्छ । विज्ञ कर्मचारी पनि छैनन् । त्यसकारण हामीले कृषि, शिक्षा वा अरू विषयमा समयको आवश्यकताअनुसार योजना बनाएर काम गर्न सकिरहेका छैनौं ।’
मुल हाट लाग्न नपाएपछि थोरै परिमाणमा तरकारी बेच्दै इनरुवा–३ सोमबारेमा टुक्रे व्यापारी ।
लकडाउनको अवधि अर्थात् चैत, वैशाख, जेठमा इनरुवाका किसानले कुन–कुन प्रजातिका तरकारी कति मात्रामा खेती तथा उत्पादन गर्छन् वा गरे भन्ने सामान्य तथ्यांकसमेत तत्काल नभेटिने इनरुवा नगरपालिकामा यो अवधिमा कति क्षति भयो भन्ने उल्लेख गर्न गाह्रो छ । तर यो अवधिमा भएको क्षतिका कारण देशका अन्यत्रका किसानको ढाड खुस्किएजस्तै यहाँका तरकारी किसान पनि थला परेका छन्, जुन जगजाहेर कुरा हो । यस्तोमा थला परेका किसानको राहतका लागि स्थानीय सरकारले आफ्नो तर्फबाट कस्तो कार्यक्रम ल्याउँछ ? हेर्न बाँकी छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १७, २०७७, १३:०१:००
दक्षिण एशियाका देशहरूमा कोरोना सङ्क्रमण घटिरहँदा नेपालमा किन तीव्र गतिमा बढ्यो ?
आहा ! रानी पोखरी
नवदुर्गाको सुन्दर मूर्ति
रात परेपछि सेनाको हेलिकप्टर सडकमा गुडाएर खरिपाटी लगियो (फोटो फिचर)
यसरी मनाइयो ६५ औं प्रहरी दिवस (फोटो फिचर )